သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ်စိတ်ပျက်နေပြီဆိုတာသိနိုင်မယ့်အချက် ၈ ချက် | Buzzy
သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ်စိတ်ပျက်နေပြီဆိုတာသိနိုင်မယ့်အချက် ၈ ချက်
သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ်စိတ်ပျက်နေပြီလားဆိုတာ ဒီအချက်တွေကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။
သင့်စကားကိုနားထောင်ပြီးသူကသင့်အပေါ်ချစ်တယ်ဆိုတာသိစေတာမျိုး၊ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးတာမျိုး၊ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်တိုင်ပင်နေကျပုံစံမျိုးကိုမလုပ်တော့ပဲသူ့စိတ်ကြိုက်သူ့သဘောပဲလုပ်နေတာမျိုးပါ။ရင့်ကျက်သွားတာမျိုးလား?သင့်အပေါ်စိတ်ပျက်သွားတာလား? ဆိုတာ အောက်ကအချက်တွေကိုထပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ။
၂။နောက်တစ်ချက်ကတော့အပြင်အတူတူသွားတဲ့အခါ သင်တစ်ယောက်တည်းအပေါ်အာရုံမရှိပဲတခြားသူတွေကိုလိုက်ပြီးကြည့်နေတာမျိုးပါ။လူကသာအနားမှာရှိနေပြီး စိတ်က တခြားကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သူကသင့်အပေါ်အလေးမထားတော့ဘူးဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ယောက်နဲ့ပြတ်ပြီးရင်တောင်နောက်တစ်ယောက်က သူတို့စိတ်ထဲမှာအဆင်သင့်ရှိပြီးသားလို့တောင်ယူဆလို့ရပါတယ်။
၃။ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်လို့အဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးမှာသင့်ကိုပဲအပြစ်တင်မယ်။အရင်က နားလည်မှုတွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ကြပေမဲ့ စိတ်ပျက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်ပဲမှားမှားသင့်ကိုပဲအဆိုးမြင်ပါလိမ့်မယ်။
၅။နှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အခါမျိုးမှာအနာဂတ်အကြောင်း၊မိသားစုအကြောင်းတွေအများကြီးမပြောတော့ဘူး။အွန်လိုင်းမှာတွေ့ရင်လည်းလူရှိနေပြီး စကားလာမပြောတာမျိုး၊လာပြောရင်လည်း ခဏလေးပဲအချိန်ပေးတာမျိုး။အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်သင့်ကိုသူစိတ်ပျက်နေပြီဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။
၆။အကြောင်းပြချက်မရှိပဲအလုပ်များနေတယ်လို့ပြောလာတာမျိုးပါ။အရင်ကတော့ သင့်အတွက်အချိန်တွေအကုန်လုံးပေးထားပေမဲ့စိတ်ပျက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရုတ်တရက်ကြီးအလုပ်တွေများသွားရတာပါ။သင့်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ပေမဲ့သူက တခြားကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက်သင်နဲ့ပြတ်ဖို့ကို သူမျှော်လင့်နေပါပြီ။
၇။ချစ်သူစုံတွဲဆိုပေမဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လေးစားရပါမယ်။အပြင်သွားလို့အသိတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ သင်ကသူ့ကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သူကအရင်ဆုံးတခြားကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင် သင့်အပေါ်အလေးမထားတာပါ။
၈။နှစ်ယောက်ကြားမှာဆက်ဆံရေးတွေအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယုံကြည်မှုတွေပါပျက်လာနိုင်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းခြေလှမ်းတွေပျက်လာတာကိုသိနေရတော့ဘာပဲပြောပြော သင့်ကိုလိမ်ပြောနေတယ်ပဲထင်တော့မှာပါ။သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်က သင့်ကိုစိတ်ကုန်နေပြီးခဏခဏလိမ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့သေချာစဉ်းစားသင့်ပါပြီ။သင်ကချစ်ပေမဲ့ တစ်ယောက်တည်းချစ်နေလို့မှမဖြစ်တာ။
ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးတိုက်ဆိုင်နေပြီဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ ချစ်သူက သင့်အပေါ်စိတ်ကုန်နေပြီဆိုတာသေချာပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေရှင်းပြီးကိုယ့်လမ်းကိုဆက်လျှောက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကိုယ့်အပေါ်မချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဆွဲထားတာထက် သူ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာကနှစ်ယောက်လုံးအတွက်ကောင်းပါတယ်။
လိင်ကိစ္စပြုလုပ်နေစဉ် သေဆုံးမှု ကိုးခု အကြောင်း
GTC ချောင်းရိုက် HD အသစ်လေးပါ
အပြာကား ပထမဆုံးကြည့်ဖူးတဲ့ ကိုရီးယားမိန်းကလေးတွေရဲ. ပြုမူပုံက
ကားပေါ်မှာ ခိုးစားခဲ့သည့် စုံတွဲ အမိဖမ်းခံလိုက်ရ
ပရိတ်သတ်တွေကို Shock ရသွားစေတဲ့ cosplayer မ လေးရဲ့မိတ်ကပ်မပြင်ခင်မျက်နှာ...
မင်းသမီးကြီးဝါ၀ါဝင်း ရွှေရဲ့ ခင်ပွန်းကွယ်လွန်
ရင်သားတင်းရင်း လှပစေမည့် နည်းလမ်း ဆယ်ချက်
သင့်ချစ်သူ(၀ါ)အမျိုးသား၏ အမူအကျင့်များသည် သင့်အား ကံကောင်းသူ ဖြစ်စေပြီလား